नयां बर्ष २०७६ बैशाख १ गते 14 April यी3काममा 1काम गरेर मनाउनुहाेस!भाग्य र भबिस्य परिवर्तन हुनेछ! – हिमाल न्युज
नयां बर्ष २०७६ बैशाख १ गते 14 April यी3काममा 1काम गरेर मनाउनुहाेस!भाग्य र भबिस्य परिवर्तन हुनेछ!
हतारको निर्णयले अप्ठ्यारो पार्ने हुँदा सजग रहनुहोला। तत्कालको फाइदा हेर्दा पछिलाई घाटा हुन सक्छ। बेसुरमा दिएको वचनले समस्या निम्त्याउनेछ। विशेष योजना सार्वजनिक नगर्नुहोला। आफन्तको सहयोग जुट्नाले काम बन्नेछ। साझेदारीबाट लाभ उठाउन सकिनेछ। लगनशीलताले फाइदा दिलाउनेछ। रोकिएका काममा दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला।
आकस्मिक खर्च बढ्नेछ भने आम्दानी कम हुनेछ। व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। फाइदाका लागि दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला। प्रयत्न गर्दा दिगो काम फेला पार्न सकिनेछ। सोचेको नतिजा तत्काल प्राप्त नहुन सक्छ। तापनि पहिलेका कमजोरी सच्याउने अवसर प्राप्त हुनेछ। बसाइको स्थानान्तरण वा टाढाको यात्रा सम्भावना देखिन्छ।
दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनेछ। प्रयत्न गर्दा राम्रो उपलब्धि हातलागी हुनेछ। रोकिएको काम बन्नाले जिम्मेवारी समेत बढ्नेछ। आम्दानी बढ्नाले उत्साह जाग्नेछ। व्यापारमा राम्रै फड्को मार्न सकिनेछ। साझेदारीबाट पनि लाभ मिल्नेछ। पारिवारिक आवश्यकता पूर्ति होला। श्रमको उचित मूल्यांकन हुनेछ। सञ्चित धनको उपयोगबाट विशेष लाभ मिल्नेछ।
मेहनत परे पनि भाग्यले राम्रै अवसर दिलाउनेछ। चुनौतीहरू हट्नेछन् भने अवसर तथा सफलताले पछ्याउनेछन्। टाढिएका मित्रगण नजिकिनाले प्रसन्नता मिल्नेछ। समुदायको हितमा विशेष काम गर्न सकिनेछ। आवश्यक पर्दा सहयोगीहरूको साथ पाइनेछ। अभाव हट्नुका साथै दाम र इनाम प्राप्त हुनेछ। धार्मिक अनुष्ठान र सेवामूलक कामले प्रतिष्ठा दिलाउनेछ।
आजको राशिफल हेर्नुहोस् २०७५ बैशाख ५ गते बुधबार...
गणेश भगवान र मंगलबारको महत्व यस्तो छ !!
भगवान श्रीकृष्णको वियोगान्त प्रेम कहानी यस्तो, बाँसुरी बजाउँदा...
धर्मशास्त्र भन्छ बाटोमा भेटिएका यी ७ चीजहरु कहिल्यै...
आज मिती २०७४ चैत्र ०२ शुक्रवारको राशिफल !
के तपाईको हातमा पैसा टिक्दैन ? त्यसो हो...
आजको दिन तपाइको शुभ रहोस ! हेर्नुस आजको...
दशैंमा टिकासँगै जमरा किन लगाइन्छ ?